Fomba malagasy Info. About. What's This?
ⓘ Fomba malagasy
Ny Fianakaviana aminny fomba malagasy dia ny fitambaranny ray sy ny reny ary ny zanaka. Ny anambadian-kiterahana, hoy ny Ntaolo, ka ny zanaka no mamy indrindra aminny Malagasy ary antsoina hoe "sombinny aina". Ny zokiny indrindra aminny zanaka dia atao hoe "matoa", ary ny zandriny indrindra dia atao hoe, "fara" ; ary ny eo antenatenany, na firy na firy isany, atao hoe "aivo" ; koa ny zanaka lahy teraka voalohany indrindra dia atao hoe "lahimatoa" ; ny farany indrindra atao hoe "faralahy" na "faravavy" rehefa vehivavy, ary ny eo anelanelanireo dia atao hoe "lahiaivo" avokoa na firy na firy, ...
Ny Taom-baovao malagasy dia ny fiandohan ny taona malagasy sy ny fankalazana izany izay mitranga eto Madagasikara sy any ivelany koa amin ny andro voalohan ny taona voafaritra araka ny tetiandro malagasy na amin ny fomba hafa. Aminizao taonjato faha-21 izao dia mizara ny hevitr ireo mpankalaza ny taom-baovao malagasy. Ao ny mitazona ny daty amin ny fizaran-taona fararano, izay heverin ny mpomba izany hevitra izany fa mifanandrify amin ny Alahamadibe taloha, ka mankalaza ny taom-baovao amin ny volana Marsa na Avrily. Ao koa ireo mitana ny daty ao amin ny lohataona ka amin ny volana Septambr ...
Ny Televiziona Malagasy dia ny mpandefa ny haino aman-jery aminny fahitalavitra ary ny firenena sy ny fanjakana malagasy no tompony. Naorina taminny taona 1965 ilay izy taminny vanim-potoana nitondraniPhilibert Tsiranana. Mba hahafahanilay televiziônam-pirenena manaparitaka ny sary sy ny feo erani Madagasikara, dia hofainy aminny EutelSat ny faritra 16° Atsinananny Zanabolani EutelSat. Torakizany ihany koa ny fomba fanaparitahany ny feonny Radio Madagasikara eo aminny onjam-peo FM., izay mitondra mari-drefy 99.00Mhz.
Ny Malagasy, aminny ankapobeny, dia ireo olona rehetra miaina ao Madagasikara. Ny olona tety ivelany no nanome io anarana hoe Malagasy io sy Madagasikara koa ho anny vahoaka malagasy sy i Madagasikara, firenena onenanny Malagasy. Ny teny hoe Madagasikara dia avy amini Marco Polo. Ny Nosini Madagasikara dia nafangarony taminny tanànani Mogadiscio, any Somalia aminizao fotoana izao, tamina sarintany.
Ny Baiboly prôtestanta amin ny teny malagasy dia dikan-tenin ny Baiboly amin ny teny malagasy ampiasain ny fiangonana prôtestanta miteny malagasy amin ny fotoam-pivavahana. Ny edisiona tamin ny taona 1909 izay nasiam-panitsiana madinika tamin ny taona 1965 no ampiasaina amin izao. Io Baiboly io no ampiasain ireo Fiangonana prôtestanta toy ny Fiangonani Jesoa Krisy eto Madagasikara, ny Fiangonana Loterana Malagasy, ny Eklesia Episkopaly Malagasy sns. sy ireo Fiangonana evanjelika sy pentekôtista maro manerana an i Madagasikara. Mitondra ny anarana hoe Ny Baiboly ny Baiboly prôtestanta amin ...
Ny fivavahan-drazana malagasy na ny finoan-drazana malagasy dia ny fivavahana sy ny finoana narahin ny Ntaolo malagasy, izay mifototra indrindra amin ny fivavahana amin ny Zanahary sy ny fanahin ireo razana efa maty. Miovaova isam-paritra ny endriky ny fivavahan-drazana malagasy noho ny fisian ny singa hafa manampy ireo efa voatanisa etsy aloha ireo. Ireto avy ny zavatra inoan ny Malagasy mandala ny fivavahan-razana ho manana ny hasiny: ny sampy, ny ody, ny hazomanga, ny vatolahy, ny karazan-kazo sasany, ny karazam-biby sasany toy ny omby. Ireto ny zavatra tsy hita maso nefa inoany fisiana ...
Ny tetiandro malagasy dia tetiandro nampiasainny Malagasy talohanny nampiasany ny tetiandro gregoriana nentinireo vazaha sady mbola ampiasaina aminny sehatry ny fanandroana. Araka ny hevitry ny maro dia tetiandro manara-bolana ny tetiandro malagasy. Tsy tokana anefa ny tetiandro malagasy fa maro vokatry ny fiaviany sy ny fiovany isam-paritra. Avy aminireo tetiandro indiana tranainy sy ny fampanjariana anaram-bolana ny anaranantokon-kintana arabo ireo tetiandro malagasy ireo. Izany no mahatonga ny anaram-bolana sasany hitovitovy aminny anaranantokon-kintana aminny haikintana na fanandroana ...
Ny Baiboly amin ny teny malagasy dia dikan-tenin ny Baiboly amin ny teny malagasy ampiasain ny fiangonana miteny malagasy amin ny fotoam-pivavahana, indrindra fa ny eto Madagasikara. Amin izao fanombohan ny taonjato faha-21 izao dia maro ny dikan-tenin ny Baiboly amin ny teny malagasy azo vakina, ka tsy amin ny teny malagasy ôfisialy ihany izany fa misy amin ny fitenim-paritra koa. Manana ny lanjany eo aminny tantaran ny Fiangonana eto Madagasikara sy ny tantaranny Firenenana malagasy ny Baiboly. Isan ny mampiavaka ny Baiboly aminny teny malagasy ny tsy fisian ny fifanarahan ny mpandika te ...
Ny abidy malagasy dia abidy ampaisaina rehefa manoratra amin ny fiteny malagasy. Io abidy io dia avy amin ny abidy latina, ampiasaina amin ny fanoratana ny ankabeazan ny fiteny, tsy ao Eorôpa ihany, fa aty Afrika sy any Amerika koa. Ny abidy malagasy dia abidy noforonin-dRadama I tamin ny 23-26 Martsa 1823, natao ho solon ny sorabe soratra miendrika arabo ampiasain ny fiteny any atsimo-atsinanani Madagasikara, indrindra ny fiteny antemoro. Ny abidy malagasy dia manana litera 21. Ny abidy noforonin-dRadama dia tsy mampiasa ny litera c, sy q, sy u, sy w ary x.
Amin ny Ntaolo malagasy dia atao hoe andriamanitra na zanahary ireo fanahy manana hery sy fahalalana ary hasina ambony lavitra noho ny an ny fanahy hafa sy ny an ny zavaboary rehetra. Amin ireo zanahary ireo dia inoan ny Ntaolo malagasy ny fisian ny iray izay antsoiny hoe Zanahary na Andriamanitra fotsiny, izay lehibe indrindra noho ireo andriamanitra ireo, sady mpahary, manam-pahefana hanome na hanaisotra ny ain ny zavamananaina. Tamin ny nifampikasohan ny kolontsain ny Ntaolo malagasy amin ny kolontsaina silamo dia naetry voninahitra tsy ho andriamanitra ireo andriamanitra maro hafa nino ...
Ny Alahamadibe na Alahamady be dia ny andro mifanandrify aminny ataonny fanandroana malagasy hoe "vava Alahamady" ao aminny volana Alahamady, izany hoe ny andro voalohany sady ahatsinananny Volana aminny volana Alahamady, izay nosafidinny mpanjaka tao Imerina hatao andro voalohanny taona. Ireo Malagasy mpankalaza ny Taom-baovao malagasy dia tsy mitovy hevitra ny aminny daty gregoriana na ny fizaran-taona mifanandrify aminny volana Alahamady. Misy ny milaza fa aminny fotoanny fararano izany volana Marsa na Aprily fa misy koa ireo milaza fa tsy aminny volana gregoriana na fizaran-taona raiki ...
Ny Alahamady no vintana voalohany ao amin ny fanandroana malagasy. Ny Alohotsy no eo alohany ary ny Adaoro no manaraka azy. Ny zoro avaratra-atsinana amin ny no toerana omena azy. Io zoro io dia atao hoe zorofirarazana koa. Amin ny Malagasy dia anaram-bintana aloha ny Alahamady vao izay anaram-bolana sy zavatra hafa. Renivintana na renim-bintana ny Alahamady. Misy amin ny Malagasy ny mandray ny volana Alahamady ho volana voalohany amin ny taona ao amin ny tetiandro malagasy.
Ny sambatra dia famoran-jaza faobe atao any aminny faritra sasan-tsasany ao Madagasikara, indrindra any aminny faritra atsinanana. Fotoana ahafahanny zazalahy hiditra ho isanny lehilahy eo aminny fiarahamonina misy azy izany. Ny foko antambahoaka no tena mankalaza azy io indrindra, isaky ny fito taona mandritra ny efatra herinandro no anatanterahana izany. Aminny fankalazana azy dia manakoako ny antsa arahinamponga hazolahy sy antsiva. Aminny fanombohanny lanonana dia roahina ny fanahy ratsy eranny tanàna, asiana haingona aminny sarin-boromailala vosokitra ny vovonanny trano. Omanina ny ak ...
Ny tromba, araka ny finoan-drazana malagasy, dia fanahy na avelon ny mpanjaka efa maty na ny taranany, na avelon olona nanan-daza teo amin ny mpiara-belona taminy fahizay ka mitoetra miaraka aminy; mbola manohy ny fanapahany ny velona amin ny alalan ny findramany ny tenan ny olona iray mbola velona ny mpanjaka raha fanahin ny mpanjaka no mipetraka ao amin ilay olona lisy tromba. Miteny amin ny alalan io olona misy tromba io ilay fanahy. Any amin ny faritra sakalava no tena ahitana izany nefa miely eran i Madagasikara ihany koa izany finoana izany. Antsa aman amponga sy angorodao no atao ha ...
Ny velirano dia fianinana atao ampahibemaso mba tsy hampisy ny hitsoaka aminny zavatra nifanarahana, aminny baiko nekena fa hotanterahina. Taminny vanimpotoana faha mpanjaka dia maha tapa-dohany fivadiham-belirano.
Misy pejy mitovy anarana aminny frantsay ato. Mety mitady: Ny Repoblika Frantsay na République Française, firenena any Eoropa anatinny firaisana eoropeanina. Ny fiteny frantsay fiteny any Frantsa. Ny frantsay dia mpamaritra anarana ampiasaina rehefa miresaka momba ani Frantsa. Avy aminny fiteny frantsay hoe français API: io teny io, ary navadika ny fiteny malagasy hoe frantsay satria ny fomba fanoratana ny teny malagasy dia fomba fanoratana ara-peo.
Baiboly prôtestanta amin ny teny mala ..